Vaovao - Nambara ny lisitry ny mpamokatra andiany fahatelo ho an'ny fisorohana sy ny fanaraha-maso ny valanaretina
Andro vitsy lasa izay
Ho an'i manks ny vaovao
Tsy misy isalasalana fa ny haintany lava dia mihaona amin'ny ando mamy
Jiaojiang dia manoratra amin'ny hetsika
“Serivisy telo” mahatalanjona indrindra
Masinina fanjairana Max Co., Ltd.
Tale jeneraly Mao Xiaoyong
Tonga ara-potoana izao. Tena tiako ny Komitin'ny Distrikan'i Jiaojiang sy ny governemanta. Amin'ity mari-pahaizana ity dia tsara ho an'ny lafiny rehetra amin'ny orinasa izany. Ny fanalefahana hetra, ny zanabola tombony ary na ny fividianana fitaovana aza dia nanokatra fantsona maintso.
Eo ambanin'ny toe-javatra valanaretina
Manana milina fanjairana afaka manao akanjo miaro
Toy ny hoe akoho manatody atody volamena
Ary orinasa manao akoho
Tsy misy isalasalana fa mamy ilay mofomamy
Ny tolakandron'ny 26 martsa lasa teo dia nankany amin'ny manks machine Sewing Co., Ltd., izay hita eo amin'ny arabe Hongjia ny mpanao gazety. Ao amin'ny atrikasa fampitaovana goavambe, ny mpiasa dia mbola ao amin'ny debugging farany amin'ny milina fanjairana. Niandry lava ny kamio kely an'ny mpanamboatra avy any Haining. Noho ny fahatahorana ny entana "tsy afaka misambotra" dia misafidy "squat" mivantana eo am-baravaran'ny orinasa ny mpanamboatra mba hahazoana antoka fa ny milina fanjairana vao novokarina dia napetraka ary natolotra faran'izay haingana.
Mao Xiaoyong, tale jeneralin'ny manx sewing Co. Andao aloha hamaha ny filan'izy ireo maika. ”
F'inona no mitranga? Andao hofantarina hatramin'ny voalohany ny orinasa
Niorina tamin'ny 2007, dia manam-pahaizana manokana amin'ny orinasa mpamokatra fanjairana sy fitaovana famokarana accessories. Ny orinasa ankehitriny dia mamokatra masinina fanapahana fehin-kibo, milina famatorana bokotra fotsy lehibe, milina fizarazarana, milina fanapahana lamba, boiler, milina fametahana, masinina fanapahana antsy boribory ary kojakoja milina fanjairana, faritra ary kojakoja milina fanjairana hafa, dia fampiroboroboana vokatra, famokarana, fanandramana sy serivisy aorian'ny varotra amin'ny orinasa iray.
Masinina manjaitra amin'ny fanaovana akanjo fiarovana matihanina
"Tsy misy fanantenana ho an'ny varotra, kely loatra ity masinina ity"
Tamin'ny voalohan'ny volana desambra 2019 dia nanamboatra milina famehezana rivotra mafana ny manks izay afaka manao akanjo fiarovana ara-pitsaboana matihanina. Tamin'izany fotoana izany, Mao Xiaoyong sy ny rainy dia tsy dia be fanantenana loatra amin'ny tsenany. "Tsy nisy afa-tsy prototype iray vao novolavolaina, ary mbola tsy nampidirina am-pamokarana mihitsy," hoy i Mao. Ny tanjona lehibe amin'ny fampiroboroboana an'io vokatra io dia ny fampiroboroboana ny vokatr'ilay orinasa. Tsy tena antenaiko ny hamaroan'ny varotra ao aminy. Rehefa dinihina tokoa, dia kely loatra ny asany. "
Raha miverina amin'ity Desambra ity ny fotoana dia nilaza i Mao Xiaoyong tamim-pitsikiana fa tsy maintsy nanangana ny takelaka fandriana ny orinasa iray manontolo ary nanomboka namokatra ity milina fanjairana ity.
Orinasa lehibe 2000 avy amin'ny orinasa afovoany
Saingy tsy sahy nanaiky ilay orinasa
“Manana famehezana rivotra mafana ianao, sa tsy izany?”
“Mila singa 2000 izahay. Ohatrinona no anananao? Azonao atao izao ny mandoa ny kaomandy. Maika! "
Tamin'ny 10 Febroary, nahazo antso an-tariby i Mao Xiaoyong tamin'ny orinasa afovoany. Nipoaka tamin'ny fomba feno io valanaretina io. Ny akanjo niarovan-tsipika teo anoloana dia tao anaty vonjy maika. Ny antoko iray hafa dia nandeha nizotra tamin'ny teboka ary nanaparitaka baiko 2000 unit. Gaga be izy fa tsy nahasahy namaly ny antso teny an-toerana i Mao Xiaoyong.
“Tamin'ny volana febroary, tsy nisy mpiasa tao amin'ilay orinasa, ary ny ampahany dia mbola tsy nanomboka ny famokarana. Aza miteny 2000, manana olana isika amin'ny 20. "Mao Xiaoyong mitsiky mangidy. Toy izany ve ny "hena matavy" atolotra ny varavarana? Mao Xiaoyong dia tsy nety. “Ahoana no tsy azo afindra lisitra lehibe toy izany? Tsy nandà azy mivantana aho. Nanandrana fomba maro koa aho, toy ny fiezahana hiara-hiasa amin'ireo orinasa hafa hamokatra miaraka, na hividy ampahany mivantana, ary hanafainganana ny fivoriambe voalohany… “Tamin'ny volana febrily” korontana ady “, be loatra ny orinasa rehetra, ary Mao Tsy nahomby ny fomban'ny Xiaoyong. Farany, ny baiko ho an'ny tarika 2000 dia voatery nolavina
Voaroaka ny antso amin'ny consultation
Masinina famehezana rivotra mafana
Mihoatra ny famatsiana ny fangatahana eran-tany
Taorian'izay, avy any Shanghai, Hangzhou, Haining, Shandong… manerana ny tsipika fivarotana lehibe manerana ny firenena, ny mpanamboatra modely tokana dia mitambatra: milina famehezana rivotra mafana.
“Miantso 20 mahery isan'andro aho raha be indrindra.” Mao Xiaoyong dia nilaza tamin'ny mpanao gazety fa manamaivana ny trangan-javatra misy ny valanaretina eto an-toerana ankehitriny, saingy mbola betsaka ny baiko. Tamin'ny fiparitahan'ny valanaretina tany ivelany dia nameno ny boaty fandefasan'ny kaonty ihany koa ireo mailaka avy any Kanada, Torkia, Moyen Orient, Amerika atsimo, Azia Pasifika ary firenena hafa. Ny milina famehezana rivotra mafana dia tsy ampy eto amin'izao tontolo izao.
(milina famehezana rivotra mafana)
Rehefa sendra olana ny orinasa dia tokony hiezaka mafy ny governemanta hanampy azy ireo
Inona avy ireo olana amin'ny fisorohana sy fanaraha-maso ny valan'aretina orinasa? Inona ny fanoherana ny fiverenana soa aman-tsara any am-piasana? Jiaojiang dia manaraka ny "serivisy telo" amin'ny fisorohana sy fanaraha-maso ny orinasa, fahasahiranana amin'ny famokarana fiarovana, hamahana ny olana.
“Tamin'ny volana febroary, nanampy ny lehilahy hiverina hiasa sy hamokatra izahay, nanolotra fitaovana fanoherana ny valanaretina, nanampy azy ireo hampanara-penitra ny fepetra fisorohana ny valanaretina, mampalaza ny siansa ary mamono fahalalana. Tamin'ny volana martsa, satria fantany fa tsy maharaka ny hafainganan'ny famokarana faritra izy ireo, dia niara-niasa tamin'ny arabe izy ireo mba hifandray amin'ny mpanamboatra hafa, ary nividy ampahany voalohany hanoloana ny famokarany manokana, mba hananganana ny vokatra aloha. ”Zhang Linghui, manampahaizana manokana momba ny serivisy amin'ny orinasa, dia nilaza tamin'ny mpanao gazety fa na dia niasa mafy aza izy mba“ hihazakazaka ”, ireo fepetra ireo dia nilatsaka tao anaty siny fotsiny, ary ny famokarana ateraky ny orinasa dia sarotra ny hanafainganana azy.
Mandra-pahatongany ny vaovao fa namoaka orinasa famokarana fitaovana lehibe hiarovana ny fisorohana sy ny fanaraha-maso ny valan'aretina ny faritany Zhejiang, dia takatr'i Zhang Linghui fa izany dia fotoana mety ho an'ny manks. Noho izany dia niantso haingana ireo mpiasan'ny Street Hongjia izy mba "hanampy" ary nankany amin'ny birao fampandrosoana sy distrika fanavaozana. Fantaro ny fepetra fampiharana, ampidiro amin'ny antsipiriany ny toe-javatra misy ny orinasa, ezaho ny quota ho an'ny max, ary omeo antoka ny famokarana matanjaka ho an'ny orinasa manana "serivisy telo" matanjaka, ara-potoana ary mafana indrindra.
Ny tompon'andraikitra misahana ny fampandrosoana ny birao sy ny birao fanavaozana dia nilaza hoe: "adidintsika ny manohana sy mampiroborobo tanteraka ny fampandrosoana ny orinasa tsara kokoa. Rehefa nahafantatra ny zava-misy momba ny manks izahay dia nitatitra izany avy hatrany ary nitahiry ny quota. Ho an'ny fanadinana manokana sy ny fankatoavana eo ambanin'ny toe-javatra misy ny valanaretina, ireo orinasa dia tsy mahalala ny fomba hanambarana sy ireo fitaovana ilain'izy ireo. Ka halefanay any an-trano sy hatramin'ny farany ny "serivisy telo". Mba hahazoana antoka fa ny orinasa voafantina dia mitory amin'ny governemanta eo an-toerana sy ny tanàna amin'ny fotoana tena izy, ary avy eo manao tatitra amin'ny governemanta eo an-toerana sy ny tanàna amin'ny fotoana tena izy
Rehefa manangona kitay ny olona dia avo ny lelafo
Masinina famehezana rivotra mafana novokarin'i Max
Manomboka amin'ny volana febroary, 5 set ny vokatra isam-bolana
Amin'ny volana martsa, 20 seta ny vokatra isam-bolana
Tamin'ny volana aprily, setroka 900 ny vokatra isam-bolana
Amin'ny volana mey, antenaina hamokatra seta 1500 isam-bolana